Ajụjụ - Green Camping Products Co., Ltd
Bụ ụlọikwuu gị waterproof?
Ma a tent bụ waterproof bụghị naanị metụtara otú mmiri kọlụm nke ákwà, ihe kacha mkpa bụ imewe na rụọ ya. Ọ na-ada mfe, ma, nza nke ulo-ikwū na ndị ahịa na-adịghị eme otú ahụ, ọbụna na ọ e kwuru mmiri kọlụm 5000mm. Daalụ maka ime ụlọ mmiri ozuzo ule ngwá, nke eme ka o kwe nwere ìhè mmiri ozuzo na oké ifufe na oge obula, ọ na-enyere anyị aka ịhụ ihe ọ bụla na-eri eri ga-ekwe omume iji hụ na anyị na-enwe ike iji na-emepụta zuru ezu waterproof tent.
Olee otú ime ka a tent waterproof?
Mbụ niile, ma ọ bụrụ na ndị tent waterproof na-abụghị nanị ndị metụtara ihe onwunwe ma na-adabere na imewe na rụọ ya. Tupu ị na-edebe iwu, ị ga-amasị mma ịjụ gị soplaya banyere ya ma na azịza doro anya.
Nke abuo, i nwere ike a tarp ọnụ gị tent dị ka a set ka gị tent waterproof. Biko cheta na nwere onye na-akụziri ọnụ gị tent.
Otú e si amata a tent maka otú ọtụtụ mmadụ?
Ntem ka ISO5912, e nwere 2 ige maka ikwū. Category A na ngụkọta ibu kwa onye karịa 2.5kg, Category B na ngụkọta ibu kwa onye karịa 2.5kgs. N'ihi Category B, onye ọ bụla kwesịrị nwere na-ehi ụra ebe ihe na-erughị 200 x 60cm. N'ihi Category A, na ngụkọta ogologo ga-erughị 195cm, obosara na ubu ga-erughị 58cm, na isi & ụkwụ ọnọdụ ga-erughị 35cm. Ọ bụrụ na ọ bụ ike nke na ị na-echeta ya, dị nnọọ nwere n'uche na onye ọ bụla kwesịrị inwe ụra ebe ihe na-erughị 200 x 60cm.
Esi kọwaa a tent bụ oruru?
Mbụ niile, ọ ga-eme ihe iwu ebe ọ ga-ere ere, dị ka ọkụ na-eguzogide na North America ahịa.
Nke abuo, ma ọ bụrụ na ndị ventilashion bụ ezuru. ISO5912 nwere dabeere chọrọ banyere ya. Ma ụlọikwuu kwesịrị e dị ka okpomọkụ nke dị iche iche ahịa.
Thirdly, jide n'aka na tent bụ waterproof ma e wezụga ya chepụta bụghị na-arịọ waterproof. Nke ahụ bụ mkpa a chọrọ ma nza nke n'ụlọikwuu emezurịrị ya.
Pụta, Strong, mgbanwe na inogide eku.
Nke ise, na-adabere na dị iche iche na nzube, ọ ga-abụ dị iche iche na-ewu imewe na họrọ dị iche iche ihe onwunwe. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla chọrọ, na-eche free ịkpọtụrụ anyị.
Bụ na mkpa na-eji a akara ukwu, otú iji a akara ukwu?
Akara ukwu nwere ike chebe gị tent n'ala site nkọ ihe, dị ka osimiri nkume, ahụhụ. Ọ bụghị ihe niile na-tent mkpa a akara ukwu.
Mgbe tinye a akara ukwu n'okpuru a tent, jide n'aka na ị na-adịghị akụkụ ya nke gị tent, n'ihi na mgbe Mmiri na-ezo, mmiri nwere ike inwe na akara ukwu na-agba ọsọ n'okpuru gị tent na sook n'ala ụlọikwuu ahụ.
Ị maara otú ọtụtụ ụdị akwa akwa rụrụ nke na-ehi ụra akpa? Gịnị bụ ihe dị iche?
Gịnị bụ akwa akwa ewu gị na-ehi ụra akpa? Bụ na o kwesịrị ekwesị nke ọma n'ihi na gị nzube? Ndi gị soplaya gwara gị nke na-ewu na-eji maka gị na-ehi ụra akpa na atụmatụ nke ọ bụla na-ewu? Nọmalị, e nwere 2 dị iche iche rụrụ na ahịa, ndị H ulo na abụọ H ụlọ.
The H Chamber bụ mfe ọtụtụ ewu ewu ewu, ikwa shei, mkpuchi na lining ọnụ ozugbo. Nke a na-ewu na-emekarị na-eji maka okpomọkụ-spring ụdị
Ugboro abụọ H ulo , nke bụ ndị kasị ewu ewu na-eji maka ala okpomọkụ na-ehi ụra akpa. Enwere 2 iche iche n'ígwé, ná mpụta oyi akwa ikwa shei & otu oyi akwa nke mkpuchi ọnụ na n'ime oyi akwa ikwa lining na ọzọ oyi akwa nke mkpuchi ọnụ, mgbe ahụ ikwa 2 n'ígwé ọnụ. Nke a abụọ H ewu nwere ihe mkpuchi na mma arụmọrụ karịa H ulo na-ehi ụra akpa ọkụ. Mgbe nza nke kwes mkpuchi ule na "thermal dummy", anyị na-ahụ na e nwere bụ ka "Nzuzo Points", n'ihi ya anyị na-eme ka mma abụọ H ewu.
Ime ụlọ H abụọ dị mma, as it’s name shows, it’s improved based on double H chamber. The sewing line on double H for both 2 layers are at same level, thermal will loss through these “cold pints”. In order to solve this problem, we designed this improved double H chamber.
Gị ọ na-ehi ụra akpa waterproof?
Ọ bụrụ na a na-agwa gị na ha na-ehi ụra akpa bụ waterproof, i kwesịrị ịtụle ma ọ bụrụ na ọ / ọ bụ na a akara. Ihi ụra akpa kwesịrị BỤGHỊ waterproof, ọ dị mkpa ka mmiri ọgwụ ọchụ na breathable. Ọ bụrụ na a na-ehi ụra akpa bụ waterproof, ọ ga-bụghị breathable nanị ụfọdụ oké elu larịị ákwà. The n'ji ga Ọsụsọ na-eche nnọọ na-ata.
Anyị nwere ọtụtụ mkpesa maka mkpọchi uwe nsogbu na anyị na-ehi ụra akpa, ị nwere ọ bụla ngwọta?
Mkpọchi uwe arụmọrụ na-ehi ụra akpa metụtara mkpọchi uwe àgwà na-ehi ụra akpa imewe. Anyị nwere a mkpọchi uwe na nnọọ mma ma naanị eri 30-40% nke YKK mkpọchi uwe. Ọ bụrụ na a na-agwa gị na ha mkpọchi uwe dị mma, biko, unu nwalee mkpọchi uwe onwe ya naanị, ị ga-amasị mma nwalee mkpọchi uwe na-ehi ụra akpa.
Ọ na-adabere na dị iche iche na-ehi ụra akpa ewu na dị iche iche ihe onwunwe na-eji maka. Biko chere free ka anyị mara ma ọ bụrụ na ị chọrọ a igwe keosusu ehi ụra akpa.
Ọ gị picnic blanket bụ igwe keosusu?
Anyị nwere igwe keosusu picnic blanket, ma ọ bụghị ihe niile picnic blanket na-mashing keosusu. Biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa.
Olee na-ekwe nkwa gị ngwaahịa mma? Gịnị n'ihe ị na-e?
Ọ gị ngwaahịa chemical free na gburugburu ebe obibi enyi na enyi?
Nwere ike ị na-enye ndị kasị ala price na ahịa?
Echere m na anyị nwere ike ghara gị ezi nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya na price naanị. Anyị nwere ike inye nnọọ asọmpi price dabeere ezi ngwaahịa imewe na mma ngwaahịa mma.
Ee, anyị nwere ike na-emepe emepe otu. The ngwaahịa nwere ike na-emepụta dị ka gị arịrịọ.
Gịnị bụ gị ụgwọ na ugwo ngwá ọrụ?
Ịkwụ Ụgwọ okwu: 30% ego tupu, 70% itule megide ndeputa B / L na 10 ụbọchị.
Ịkwụ Ụgwọ ngwá ọrụ: TT, L / C, Western otu & Paypal.
The mbupu na-eri na-adabere na usoro ị na-ahọrọ na-ngwongwo. Express bụ quickest kamakwa kasị oké ọnụ ụzọ. Site oké osimiri bụ ihe ngwọta kasị mma n'ihi na nnukwu olu. Mgbe ụfọdụ, jiri ụgbọ okporo ígwè. Kpọmkwem ibu udu dị naanị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa nke olu, ibu na ụgbọ mmiri usoro. Biko kpọtụrụ anyị maka ndị ọzọ.